Njengoba umhlaba uba wedolobha ngokwengeziwe futhi abantu behlala kude nalapho okukhiqizwa khona ukudla, kunomkhuba wokukhulisa inani lemikhiqizo yezolimo eluhlaza. I-juicing iyindlela yokwengeza inani futhi iyindlela enhle yokwelula i-raflufu yezithelo noma yemifino, engeza ukusebenziseka kalula futhi kufaka phakathi izakhamzimba noketshezi ekudleni kwanamuhla.
Ijusi, inqubo lapho umswakama kanye nezakhi kukhishwa khona ezintweni zokwakha ezifana nezithelo nemifino ngokuphula ngomshini kanye / noma ngamakhemikhali izindonga zeseli zomkhiqizo.
Ijusi ingaba yindlela yokwengeza inani ekunikezelweni komkhiqizo womlimi kepha kubandakanya izindlela zokulawula ikhwalithi eziqinile njengokulungiswa okufanele kwezinto zokusetshenziswa, ukuphepha kokudla, ukufakwa okufanele kwenhlanzeko nokulondolozwa kwamakhaza ukuze kukhiqizwe umkhiqizo onempilo, omnandi futhi ophephile.
Ijusi elicindezelwe kakhulu ligcwele izinhlobonhlobo zama-ejenti akhulisa amandla omzimba, kepha ukucubungula okunjengokubandayo, ukuxubeka kanye nokuqothula kungadala ushintsho kwizakhi zomzimba,...more
Ijusi - Izinhlobo kanye Nokuhlukaniswa
Ukuhlaziywa kwejusi kusukela ekunciphiseni kuphela uhlobo olulodwa lwezithelo ekhaya ezinkampanini zamanye amazwe ezikhipha amasu ahlanganisiwe emhlabeni jikelele....more
Ijusi yezithelo nemifino yindala kunokulima uqobo. Abantu abazingelayo baqoqe izithelo ezivuthiwe emikhunjini elula eyenziwe ngezinto ezenziwe ngezinto eziphilayo futhi ngokuhambisa lezi zithelo ezivuthiwe,...more
Izimiso Ekukhiqizweni kwaJusi
Ukucutshungulwa komkhiqizo omusha ukuze kukhishwe ujusi wawo kubandakanya okungaphezu kokuwunxilisa esitsheni. Inhloso futhi ukwandisa i-raflufu, ukwenza ngcono noma ukugcina ukunambitheka...more